I-Car Jump Start – I-Sparky Express Roadside Assistance
I-Ajax, Ontario UMarkham, e-Ontario I-Oshawa, Ontario I-Pickering, e-Ontario IScarborough, Ontario Toronto, Ontario I-Whitby, e-Ontario
Insiza Yokuqalisa Imoto. Shayela: + 1 (647) -819-0490
Insizakalo yokuqaqa imoto iyisevisi yokusiza eseceleni komgwaqo esiza abashayeli ukuqala imoto enebhethri ekhishiwe noma efile. Ukuxhumeka kwesikhashana kwenziwa kubhethri lenye imoto, noma kumthombo wamandla wangaphandle ofanele. Ukutholakala kwangaphandle kukagesi kuvuselela ibhethri lemoto ekhubazekile futhi kunikeze amanye amandla adingekayo ukukhonkotha injini. Lapho imoto isiqaliwe, uhlelo lwayo lokushaja olujwayelekile luzogcwaliswa kabusha, ngakho-ke umthombo osizayo ungasuswa. Uma uhlelo lokushaja imoto lusebenza, ukusebenza okujwayelekile kwemoto kuzobuyisa ukukhokhiswa kwebhethri.
Sinikezela ngensizakalo yokuphepha yemoto ephephile yanoma iyiphi imoto, enkulu noma encane. Isevisi yethu yokuqalisa imoto yeqa insizakalo yokusiza eceleni komgwaqo etholakala kulezi zindawo ezilandelayo: I-Toronto, Markham, Pickering, Ajax, Whitby, ne-Oshawa, noma kunjalo, uma izimo zethrafikhi nokuma kochwepheshe bethu kuvumela, sizohamba ibanga siye kwezinye izindawo ukusiza abashayeli abadinga insizakalo yokugxuma kwemoto .
I-FAQ Yesevisi Yokuqalisa Imoto
Funda kabanzi mayelana nensizakalo yethu yokuqaqa imoto.
Ngingacela kanjani ukuqala kwemoto?
- Ngocingo (kunconyiwe). Uma udinga ukuqala kokuqhuma kwemoto, sicela ushayele ku (647) -819-0490 bese unikeza opharetha indawo yakho nohlobo lwemoto.
- Ku-inthanethi. Ungayibhukha insiza yethu yokuqaqa imoto online, khona lapha kuleli khasi.
Ngingakwazi yini ukuqala imoto uma imoto yami imile egalaji?
Akukhathalekile ukuthi ipakwe kanjani imoto yakho. Isevisi yokuqalwa kwemoto inikezwa kusetshenziswa amaphakethe ama-booster angasetshenziswa kunoma iyiphi indawo lapho kupakwe khona imoto. Inqobo nje uma kukhona ukufinyelela kwibhethri lemoto yakho, singanikeza ngemoto yokuqalisa isevisi.
Ngabe imoto yeqa iqala ukushaja ibhethri?
Cha, insiza yokuqalisa imoto ayishajisi ibhethri. Insizakalo yokugxuma kwemoto ikusiza ukuthi uqale imoto lapho ibhethri lifile noma likhishiwe. Lapho imoto isiqalile, enye indawo izokhokhisa ibhethri.
Nginaso isikhathi esingakanani ukugcina injini isebenza ngemuva kokuqala kweqa?
Ngaphambi kokuthi sinikeze ukuqala kokuqhuma kwemoto, sizolinganisa i-voltage ngqo yebhethri lemoto yakho. Ngokuya ngokufundwa kwamandla kagesi, uchwepheshe wokuqaqa imoto uzokwenza izincomo ezidingekayo ngobude besikhathi okufanele ugcine ngaso injini isebenza.
Okwenzelwe indawo yesevisi yesevisi yokuqala kweqa imoto, sicela uvakashele uhlu lwethu lwe-Google. Sivame ukuhlinzeka ngemoto yokuqala isevisi eToronto, Scarborough, Pickering, Ajax, Whitby, Oshawa naseMarkham.
Uyikhokhela kanjani insiza yethu yokuqalisa imoto.
Ngeke size sikubuze imininingwane yekhadi lesikweletu, noma sicele noma iyiphi inkokhelo kusengaphambili, noma ngabe ubhukha insiza yethu yokuqalisa imoto ku-inthanethi. Zonke izinkokhelo zifuneka ngemuva kokuqedwa komsebenzi, futhi uchwepheshe wethu uzocubungula inkokhelo yakho ngekhadi lesikweletu, ikhadi lasebhange, ukheshi noma amanye amafomu okukhokha anjenge-Apple Pay, i-Google pay, njll.